Somaliland: 9-Qof oo Loo Xiray Ka Ganacsiga Diinka – Goobjoog News
Somaliland ayaa waxaa ay dad u xirtay ka ganacsiga xayawaanka diinka, arrintaas oo bilihii ugu dambeysay laga dareemayey guud ahaan Soomaaliya.
Wasiirka wasaaradda Deegaanka Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo maanta warbaahinta kula hadashay magaalada Hargeysa ayaa sheegtay in ay xabsiga u taxaabeen sagaal ruux oo lagu qabto iyagoo ka ganacsanaya xayawaanka Diinka.
Wasiirku waxay intaasi ku dartay in ka ganacsiga duurjoogtu uu yahay mid ka mamnuuc ah Somaliland marka loo eego xeerarka iyo sharciga.
“9-ruux oo midi wiil yar yahay oo lacagta usoo uruurinaayay ayaanu kusoo qabanay, diimanka aanu maanta kusoo qabanay waa kuwo waawayn oo culus oo aan dhulkaba laga hinjin karayn” ayay tidhi wasiirka wasaaradda deegaanka Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil.
Ugu dambeyntii, wasiirka deegaanka Somaliland waxaa ay sheegtay in maxkamad lasoo taagi doonno dadkan lagu qabtay ka ganacsiga Diinka isla markaana sharciga la hor gayn doonno.